Box manavao ny fampiharana ho an'ny iOS ary manolotra 50 gb maimaim-poana | Vaovao IPhone
Box manavao ny fampiharana ho an'ny iOS ary manolotra 50 gb maimaim-poana
Ny serivisy fitehirizana rahona malaza BOX dia namoaka fanavaozana lehibe ho an'ny iDevices, nitondra ny fampiharana ho an'ny kinova 3.0. Ny fanavaozana dia misy a endrika vaovao namboarina tamin'ny iOS 7, fikarohana amin'ny fotoana tena izy sy ao anaty rakitra, ary fanatsarana marobe.
Mikasika ny redesign, avy amin'ny BOX no taterin'izy ireo izany naverina naverina nosoratana tanteraka ny fampiharana mampifanaraka azy amin'ny interface vaovao, manatsara ny hafainganana ary manamora ny fivezivezena amin'ny alàlan'ny fisie. Ao amin'ny andiany 3.0, noforonina haingana kokoa ny antontan-taratasy, nakarina vetivety ny sary ary tsy asa mandreraka intsony ny fizarana, toy ny hatramin'izao.
Fampiasana BOX vaovao ho an'ny iOS 7 amin'ny andiany 3.0:
Fampiharana navaozina tanteraka nifanaraka tamin'ny interface iOS vaovao.
Rafitra fitetezana vaovao ary ny interface interface an'ny mpampiasa.
topi-maso ny antontan-taratasy, sary ary horonan-tsary.
Fanodinana antontan-taratasy sy fampidirana sary efa voarindra.
Fikarohana amin'ny fotoana tena izy fisie sy ao anatiny.
Satria tsy misy fomba haingana kokoa hahitanao izay rehetra omen'ny BOXDia asehoko anao ny horonantsary fampiroboroboana an'ity fampiharana ity.
Amin'ny ezaky ny hanakaiky kokoa ny fahefana farany akaiky ny Dropbox (na eo aza ny fahaiza-manao ambany atolotra azy) Manolotra toerana fitahirizana 50 Gb mandritra ny androm-piainana i Box ho an'izay mpampiasa misintona ny fampiharana vaovao afaka 30 andro ho avy. Ny 50 gigs dia in-5 ny fahafaha-manome atolotry ny BOX rehefa mamorona kaonty ianao ary 25 heny ny fahafaha-manolotra Dropbox ho an'ireo mpampiasa rehefa misoratra anarana izy ireo.
Ireo mpampiasa BOX amin'izao fotoana izao dia ho faly amin'ny fanavaozana lehibe anio ary indrindra amin'ny tolotra fanitarana hatramin'ny 50 Gb amin'ireo kaonty efa nosoratany. Tsy manitatra 50 Gb ny habakabakaFa kosa, napetraka amin'ny 50 Gb izy io, tsy maintsy hazava amin'ireo mpampiasa manana drafitra fitahirizana miaraka amin'ny BOX nifanarahana. Tokony ho ampy hisarihana mpampiasa vaovao io, na dia fitsapana fotsiny aza.
Fampiharana marobe izay mamela ny fidirana amin'ny fisie ataontsika eo amin'ny rahona, ankoatran'ny Dropbox dia manana ny fahazoana miditra amin'ireo rakitra voatahiry anaty BOX, alternatera tena tsara amin'ny fahaiza-manao mahantra atolotry Dropbox anay.
Inona no andrasanao? Hivadika amin'ny Dropbox mankany BOX ve ianao noho ity tolotra ity? Miandry ny hevitrao izahay.
BOX dia misy maimaimpoana ho an'ny iPad sy iPhone.
Box - Fitantanana ny atiny rahonamaimaim-poana
Fanazavana fanampiny - Mandà i Dropbox fa notafihan'ny hacker izy io
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Box manavao ny fampiharana ho an'ny iOS ary manolotra 50 gb maimaim-poana
Vorax81 dia hoy izy:
Tolotra tena tsara izany. Notsidihiko ny rindranasa ary malahelo zavatra aho. Tsy afaka mampakatra ny roul iPhone ho an'ny rahona amin'ny Box ho azy? Tsy maintsy misafidy ny sary rehetra ianao (ary tsirairay) ???
Mamaly an'i Vorax81
Azonao atao ny misafidy sary hatramin'ny 145 hampakatra azy indray mandeha.
Manolo Manolo dia hoy izy:
Vao nampidina azy aho ary tena mahaliana. Ary ilay 50gb be ranony be. Saingy tsy hitako ny fomba fampidinana azy io ho an'ny iPhone (andefasana IRAY iray ihany: O) Tsy misy fomba hafa ve?
Valiny tamin'i Manolo Manolo
Hugo Rojas M. dia hoy izy:
Nampidiniko izy io ary manome ahy 10 GB fotsiny
Valiny tamin'i Hugo Rojas M
Inona no tokony hataoko hahazoana ilay 50 GB? MISAOTRA
Browser Changer, ovao ny browser default an'ny iOS (Cydia)
Apple dia hamerina ny volan'ny fividianana zaza tsy ampy taona amin'ny fampiharana